UMongameli Brazilian Bolsonaro engafuna ukuvimbela amafilosofi ubulili ezikoleni | Apg29
Izingane zesikole kufanele bavikeleke amafilosofi ubulili, ubhala uMongameli yeBrazil yakwaYahire eseBhashan Bolsonaro ku-Twitter.
Image: World namuhla.
Akunzima ukuqonda ukuthi kungani umongameli Brazilian yakwaYahire eseBhashan Bolsonaro, efana UMengameli waseMelika Donald Trump, ethandwa kakhulu phakathi kwamaKristu.
Izingane zesikole kufanele bavikeleke amafilosofi ubulili, uMongameli we-Brazil, uJayire Bolsonaro, wathi ubuka Twitter. abaphathi bakhe buyobe uthumele bill ngalolu daba.
"Ukuze uvikele izingane esikoleni, ngiye ngacela eMnyango Wezemfundo ukulungiselela bill lokuvala amafilosofi ubulili esikoleni esiphansi," aziloba 3 Septhemba.
Lo mnyakazo kuhambisana sibalo Bolsonaro lapho eba umongameli Brazil ..
"Sinethuba eliyingqayizivele ngaphambi ukuba bavuselele izwe lethu ... Thina bantu esisodwa, ugcine umndeni, inhlonipho izinkolo uqoba lwakhe uyisisekelo komJuda kobuKristu, ekulweni amafilosofi ubulili, ukugcina imithetho yethu," usho kanje, ngokuvumelana The Guardian.
Akunzima ukuqonda ukuthi kungani umongameli Brazilian yakwaYahire eseBhashan Bolsonaro, efana UMengameli waseMelika Donald Trump, kakhulu ethandwa phakathi kwamaKristu. Futhi sengathi sabafowabo American, akayena bemthanda imibuthano LGBT kanye kwesokunxele Liberals.
Emhlabeni esikoleni okungcono
Sunday School kuyinto esikoleni okungcono kakhulu izingane! Mabehlele kuSonto skole ukuze ukumbamba uJesu - noma kunalokho, ukuthi uJesu uzithola - ke kuyoba okuphephile nobunye ngokusebenzisa ukuphila.